🥇 accounting emsebenzini akude
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 293
Ividiyo yokubalwa kwemali ekude
Oda ukubalwa kwezimali emsebenzini okude
Ukucabangela isisebenzi ngasinye lapho sisebenza ukude kubaluleke kakhulu okwamanje, uma kubhekwa isimo somhlaba, ukuwohloka komnotho, kanye nokushintshela emsebenzini okude. Ukubalwa kwemali ngomsebenzi okude kufanele kurekhode inani langempela lesikhathi esisetshenzisiwe, ikhwalithi yemisebenzi, kanye namavolumu. Ukuphathwa kwezimali zomsebenzi okude akulula, kunendlunkulu encane yabasebenzi, kepha uma kukhulunywa ngabasebenzi abaningi abangahlanganyela kwezinye izinhlobo zomsebenzi ngaphandle komsebenzi, kunzima futhi kuyingozi. Ukubalwa okukude komsebenzi ekhompyutheni kuvumela ukubona imisebenzi yabasebenzi nsuku zonke, kuhlaziywa inani lamahora asetshenzisiwe nekhwalithi ngevolumu yemisebenzi eyenziwe, kepha uma kungekho software ekhethekile, kunzima ukuhlaziya isimo jikelele wezindaba. Sebenzisa ngokunenzuzo uhlelo lwethu oluyingqayizivele noluphelele lwe-USU Software system, olusiza hhayi kuphela engxenyeni yokukhiqiza yokwenza imisebenzi ethile. Futhi, ithuthukisa amahora okusebenza kude, iqaphe umsebenzi wabasebenzi ngaso sonke isikhathi, yethule imibiko nemidwebo, ibonise iphaneli lomsebenzi kusuka kukhompyutha yalowo ongaphansi, ngendlela yefasitela kusuka kuqapha lekhamera yokubhekwa kwevidiyo. Imenenja iyakwazi ukuqapha imisebenzi eqhelile yabasebenzi, kube sengathi wonke umuntu usehhovisi, uhlaziya inqubekela phambili nekhwalithi yokusebenza okwenziwayo, ephenya umugqa wesikhathi wemisebenzi eyenziwayo, ebona umsebenzi nokuxega, ehlaziya uhlobo lwephutha ngoba isisebenzi singangena ohlelweni ngaphandle kokucima ikhompyutha, sinikeze ukuqonda ukuthi iyasebenza, kepha empeleni yenze izindaba zayo. Uhlelo lokuphathwa kwezimali luhlinzeka ngomsebenzi owodwa wokude kubo bonke abasebenzi, ngemodi yokusetshenziswa okuningi, ukuhlinzeka ngokungena nokwenziwa kwemisebenzi abayinikiwe, ngaphandle kokwehluleka kokusetshenziswa, kusetshenziswa i-akhawunti yomuntu siqu, ukungena ngemvume ne-password. Ekuphathweni kokubalwa kwezimali, kuhloswe ukuthi kwehlukaniswe amalungelo abasebenzisi ngokuya ngomsebenzi wabasebenzisi, ukuvikela imininingwane egcinwe ohlelweni lwemininingwane ebumbene. Thola okokusebenza ngomsebenzi okude okudingayo, otholakalayo ucabangela ukusetshenziswa kwenjini yokusesha yokuqukethwe, ukunciphisa isikhathi sosesho emizuzwini embalwa. Ukufaka imininingwane kutholakala ngokuzenzakalela noma ngesandla, ngokokubona kwabasebenzi, besebenzisa imithombo ehlukahlukene nokusekelwa, cishe wonke amafomethi emibhalo ye-Microsoft Office Word noma ye-Excel. Ukuphathwa kokubalwa kwesikhathi somsebenzi esikude sabasebenzi kwenziwa ngokuzenzakalela, kubalwa inani eliqondile lamahora nomsebenzi owenziwayo, kuhlaziywa inqubekela phambili, kuqhathaniswa namagrafu, nokubala amaholo ngokususelwa kulokhu kufundwa. Yonke idatha evela kumakhompyutha wabasebenzi ithunyelwa ku-accounting system abaphathi, ukuze bahlaziye futhi balawule ukufundwa komsebenzi owenziwa kude, kuqoshwe abasebenzisi abasebenzayo nabangasebenzi, kubamaka ngemibala ehlukene, ukukhomba uhlobo lwephutha, ukuxhumeka kwe-Intanethi okungalungile noma ukungabikho komsebenzisi uqobo. Ngokubala amaholo ngokususelwa ebufakazini, abasebenzi abawachithi ngokwandisa ikhwalithi nevolumu yemisebenzi eqhelile, ethinta ngqo isimo senhlangano.
Ukushintshela emsebenzini wokude bekuyinto eguqukayo, kepha ngohlelo lwethu akukho mehluko obonakalayo, ngoba yonke imisebenzi yenziwa ngendlela efanayo futhi nangcono, kucatshangelwa ukuphathwa kwezimali njalo, ukuhlaziywa, nokuphathwa. Jwayela ukuphathwa kwezimali nokuphathwa ngokufaka inguqulo yethu yedemo yamahhala. Ochwepheshe bethu bazokusiza ukweluleka ngazo zonke izingqinamba, abazokwethula ekuphathweni kwezimali zomsebenzi wokude futhi bakusize ukumisa uhlelo kuwo wonke amakhompyutha.
Isoftware ezenzakalelayo ingalungela imisebenzi yokuphatha kanye nokubalwa kwemali ngomsebenzi okude kunoma iyiphi inhlangano.
Inani lamakhompiyutha axhunyiwe alilinganiselwe, kunikezwe ifomu le-multichannel lomsebenzi wokude nokuhlanganisiwe. Isisebenzi ngasinye sinikezwa ukungena ngemvume ne-password yomuntu siqu. Ukunikezwa kwamalungelo okusetshenziswa kusekelwe emsebenzini wochwepheshe, ukuqinisekisa ukuthembeka nekhwalithi yolwazi olutholakalayo. Lapho isipele, izinto zihlala zivikelekile futhi zingashintshiwe isikhathi eside. Lapho ungene ngemvume, idatha efakwa ezingodweni zomsebenzi ngamunye, kanye nokuphuma, ukungabikho, kanye namakhefu emini. Ukuhlelwa kwemicimbi eyahlukahlukene nokwakhiwa kwamashejuli omsebenzi kwenziwa ngokuzenzakalela. Inani lama-computer elingenamkhawulo liyatholakala ukuhlanganisa.
Abasebenzi bayakwazi ukubona imisebenzi ehleliwe, benokufinyelela kusihleli somsebenzi, beqopha isimo sokusebenza okuqediwe okuqediwe. Ukusekelwa cishe kwawo wonke amafomethi emibhalo ye-Microsoft Office kukhompyutha. Yonke imisebenzi yekhompyutha izenzekela. Ukusetha indawo yokusebenza nendawo yokusebenza kunikezwa isisebenzi ngasinye ngazinye. Ukuhambisa izinto kuyatholakala ngesandla noma ngokuzenzakalela. Imininingwane yokungenisa iyatholakala emithonjeni ehlukahlukene. Thola idatha etholakalayo, ucabangela ukusetshenziswa kwenjini yokusesha engokomongo. Abasebenzisi bangasebenza kumakhompyutha noma kumadivayisi eselula. Isitolo siyatholakala ngamanani angenamkhawulo. Khetha ulimi lwangaphandle olufunayo namamojula. Ukuhlanganiswa nezinsimbi ezahlukahlukene kanye nokusetshenziswa, nokulawulwa kukho konke ukunyakaza kwezezimali, ukuhlanganiswa nohlelo lwe-USU Software nakho kuyasekela. Amandla okwenza ngezifiso nokuthuthukisa ukwakheka kwelogo. Ngokuya ngenani labasebenzisi, iphaneli yokulawula yomphathi izoshintsha. Ukugcina isizinda semininingwane esihlanganisiwe esinemininingwane ephelele kanye nemibhalo. Ngokubika kokuhlaziya nokubala, umphathi uyakwazi ukuhlaziya imisebenzi yebhizinisi, abone ukukhula nokwehla.